ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ရမ်ဘိုနှင့် စင်္ကာပူက မြန်မာများ”
So good commentary and conclusion for Rambo.
ကိုပေါရေ ။ သောကြာနေ့ကသွားကြည့်ထားတယ်။
အဲဒီနေ့က အခြေအနေအရ ထပ်လာမကြည့်ဖြစ်လိုက်ပေမယ့် စီစဉ်သူတွေအားလုံးကို လေးစားကြောင်း ဒီနေရာကနေ ပြောလိုက်ပါရစေ။
congradulation for your comments.
In Paris we will do like this , unfortunately in France myanmar community is so little. So we can arrange see together by group.
after all, we (all burmese) only can do for our liberty n i'm sure that all together we can get our democracy.
ဟုတ်တယ်..ဒါ ရန်ငါ ပြတ်ရတဲ့ ကိစ္စပဲ..။
စင်္ကာပူက လှုပ်ရှားမှုအကြောင်း ဒိန်းမတ်သတင်းစာထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်... http://thetoo.blogspot.com/2008/02/blog-post_09.html
aww..u guys manage to get tickets and watch it again naw!
thats good pa.
..heard sold over 700++ naw..
inn..united we stand pop!!
thanks for sharing the event details with us!